Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free - Page 21 Of 23 - ImNepal.com 1
Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free
Read here Nepali Novel Books, Nepali Novel, Nepali Novel Online, Nepali Novel Download, Jitendra Sahayogee, Pagalpremee, Nepali Novel Pagalpremee, Novel By Jitendra Sahayogee, Books by Jitendra Sahayogee, Nepali Upanyas, Nepali Upanyas Online, Read Nepali Novel, Download Nepali Novel, Nepali Novel Pdf, Nepali Novel Download PDF, Nepali Sahitya, Nepali Upanyas Read Online, Nepali Novel Read Online, Free Nepali Novel Download pdf and Free Nepali Novel pdf.
पाखुरा पछाडिबाट पक्डन पाएन । पुरनपुर पुगेपछि प्रथमतः पंकज पन्चारामको पटाङ्गनिीतिरको पथलाई पछ्यायो । पन्चारामसम्म पुग्न पंकज पायो ।
पन्चारामको पटाङ्गनिीमा पंकज पधार्‍यो । पंकज पन्चारामको पटाङ्गनिीमा पधार्दा पदमिनीले पोते पहिरेकी पंकजले पायो ।
पन्चारामकै प्राङ्गनमा परिरहेको परशु पंकजले पक्डयो । परशु पक्डेर पंकज पन्चारामको पिढीमा पुग्यो । परशु पक्डेर पन्चारामको पिढीमा पंकज पुगेपछि पन्चारामलाई पीर पर्‍यो । पंकजले पन्चारामलाई पुकार्‍यो । प्रेम परस्त पंकजको पाणीको परशू पदमिनीले पक्डिन् । पदमिनीले पंकजलाई पच्कारिन्, “पतिलाई पिट्न पाइदैन । पुर्व प्रेमिकालाई पनि पिट्न पाइदैन । पुर्व प्रेमिकाको पतिलाई पनि पिट्न पाइदैन । प्रेमिकाको पतिलाई पिटेमा पापीको पद पाउँछ । पिट्ने प्रेमी पापीको पद पाउँछ ।”
परिणयपश्चात पदमिनी परस्त्रीमा परिन् । प्रेमिकाको प्रतिछाया परस्त्रीमा पाइदैन । पदमिनीको पच्चिस प्रतिशत प्रेम पायो पंकजले । पचहत्तर प्रतिशत पदमिनीको प्रेम पन्चारामले पायो । प्रेमको पच्चीस पाठमा पदमिनीसँग पन्ध्रवटा पाठ पढेथ्यो । पदमिनीको प्रतिलिपी प्रेमिका पाइदैन ।
“पत्थरलाई पगालिदैन । परस्त्रीलाई पत्याउनुहुन्न । पलाँसको पुष्पमा परिमलमा पर्दैन । पृथ्वीले प्रकृतिलाई पाल्छ । पृथ्वीले प्रकृतिलाई पिरोल्दैनन् । पानीले पत्थरलाई पगाल्दैन । पानीले पुस्तकलाई पगाल्छ । पुर्व प्रेमिकालाई पत्याउनुहुन्न । पुर्व प्रेमिकाको प्रेम पाउनुहुन्न ।” पंकजले पुर्व प्रेमिकालाई पलाप्यो ।
पंकजले प्रेमिका पदमिनी पाएन, पन्चारामकी पत्नी पदमिनीलाई पायो । परस्त्रीलाई पहिचानेन पंकजले । पंकजले प्रेमिकालाई पहचान्यो । परिणयको पुष्ट पनि प्रमाण पनि पंकजले पायो । परिणयको प्रमाणमा पोते पहिरिएकी पदमिनीलाई पंकजले पायो । पर पीडक पे्रमिकालाई पंकजले पायो । परस्त्रीलाई पाउँदा पंकजलाई पीर पर्‍यो । पंकजले पदमिनीलाई पाँच पन्ध्र प्रश्न पुछेन । पंकजले पाणीले पदमिनीलाई पिट्यो । पंकजले परस्त्रीलाई पिट्यो । प्रेमिले पे्रमिकालाई पहिलोपटक पिट्यो । पंकजले पन्चारामकी पत्नीलाई पिट्यो । परपुरुषकी पत्नीलाई पाणीले पंकजले पिट्यो ।
पर पीडकलाई पिट्नुपर्छ । पर पीडकलाई पिट्न पाउनुपर्छ । पदमिनी परपुरुषबाट पिटिइन् । पिट्नलाई प्रक्रिया पुराएन पंकजले । पापीलाई पिटेर पार पाइदैन । पापात्मालाई पिट्न पो पर्छ । पतिलो पतर्नीलाई पिटेर पार पाइदैन । पानीपुरुषमा पनि पंकज पर्दैनथ्यो ।
पंकजले पदमिनीबाट प्रतिकार पाएन । प्रतिरोध पाएन । प्रतिवाद पाएन पदमिनीबाट । पन्चारामबाट पनि पंकजले प्रतिकार पाएन । पंकजले पाणीमा परशु पक्डेकैथ्यो ।
पंकजले पदमिनीलाई पट पिटेर पितातिर पधारे ।
पंकजको पुरनपुरमा पुनरागमनले पदमिनीलाई पिरोल्यो । पंकजलाई पनि पिरोल्यो ।
‘परस्त्रीलाई पंकजले पुकारिरहेछ । पंकजले परस्त्रीको पाणी पकडिरहेछ । पंकज परस्त्रीको प्रेम पाउन पल्किरहेछ । परस्त्रीसँग प्रेमको परिकारहरु पंकज पिसिरहेछ । परस्त्रीसँग प्रेमको परिकारहरु पकाइरहेछ । परस्त्रीसँग प्रेमको पानी पंकजले पिइरहेछ । पंकजलाई प्रेमले पिरिरहेछ । पंकजले पदमिनीलाई प्रेमपासमा पारिरहेछ । पंकजले पन्चारामकी पत्नी पदमिनीलाई पटाइरहेछ । परस्त्रीसँग पंकजले प्रेमको पानी पोखिरहेछ । परस्त्रीसँग प्रेमको पाना पल्टाउँदोलाई पापीको पद पाउदैछ । परस्त्रीगमनलाई पुरनपुरले पचाउँदैन । परस्त्रीगमनमा पल्केको पंकजलाई पिट्नुपर्छ । परिणयपश्चात पनि पन्चारामकी पत्नीले परपुरुष पंकजलाई पछ्याइरहेछिन् । परपुरुषको प्रेम पाउनमा पंकजकोमा पुगिरहेछिन् । पदमिनी पराइको पटाङ्गनिीमा पधारिन् । पंकजको पटाङ्गनिीमा पुगिन्, परिणयपश्चात । पदमिनीले पति पन्चारामबाट प्यार पाएन । पर्दाभित्रको प्रेम पाउन पल्कयो ।’ पँधेरामा पधेर्नीहरु पंकजमाथि पीडाको पानी पन्याइरहेछन् । पुरनपुरवासीहरु पदमिनीमाथि पीडाको पानी पारिरहेछन् । पंकजको प्रतिष्ठा पातलियो । पंकजको पिताको प्रतिष्ठा पातलियो । पदमिनीको पनि प्रतिष्ठा पातलियो ।
पंकज प्रलयमा पर्‍यो । पंकजको प्रेम पलयमा पर्‍यो । पदमिनीको परिणय पन्चारामसँगले पंकजलाई प्रलयमा पार्‍यो । पदमिनीको परिणयलाई पंकजले प्रलयकारी परिणयको पदवी पहिरायो । पंकजले प्राणप्रियाकी प्रेम पाएन । प्रत्येक प्राणीले प्रेम पाउँछ, पाउनुपर्छ पनि । पंकजको पोल्टोमा परिताप पर्‍यो । परन्तु पदमिनीको पोल्टोमा परितोष पर्‍यो । पदमिनीले पोल्टामा परमानन्द पोल्टाइन् । प्रधानतः परजातिले पंकजको प्रेम पातालमा पुरियो । पदमिनीको प्रेमले पंकजलाई पातालमा पुरिरहेछ । पदमिनीको प्रेमले पंकजलाई पातालमा पारिरहेछ । पदमिनीको प्रमेले पंकजलाई पतालामा पुरिरहेछ । पदमिनीको प्रेम पंकजलाई पातालमा पुरिहेछ । प्रेमको पियासी पंकजले प्रेम पाएन । पंकजको पावन प्रेम पासोमा पर्‍यो । पंकजको पावन प्रेम पैसाको पासोमा पर्‍यो । पंकजको पावन प्रेम पिँजडाभित्र पर्‍यो । पिजडाको पन्छीको पीडा पंकजले प्रेममा पायो । पंकजको प्रेम पिडालुको पातको पानीमा पुस्टियो । पिरतीमा प्रचुर पीडा पाइदोरहेछ । परजातिको पीडाले पिराउदैछ । पंकजलाई प्रेमको पिरोलो पर्‍यो । पंकजलाई पैसाको पिरोलो पर्‍यो । पंकजलाई परजातको पिरोलो पर्‍यो । पंकज पीडाले पिल्सियो, पीरले पिल्सियो । प्रेमको पिशाचहरुले पिरोल्यो । प्रेमको पीडाले पिसियो । प्रेमको पातहरुले पाछ्यो । प्रेमका पातहरुले परिताप पुछ्न पाएन । पन्चारामसँगको परिणयले प्रेमका पातहरु पर पुगायो । प्रेमका पारखीहरुले पंकजको प्रेमलाई परपर पुर्‍यायो । प्रेमविधामा पारङ्गत पंकजले पदमिनीबाट प्रेम पाएन । पारदर्शी पहिरन पहिरिएर प्रेममा पारदर्शितामा पाएन पंकजले । प्रेमको पारसमणि पंकजले पाएन । पीडाको पारो पहाडमाथि पुग्यो । प्रेमको परिवर्तक परिस्थिति पायो । परिवर्तित परिस्थितिलाई पहचान्यो । पंकजको प्रेमले पुनर्मिलन पाएन । पुनर्मिलन पाउन पनि पाउँदैन । पंकजले पदमिनीको प्रेमको पुनर्स्थापनामा पाएन । पूरा प्रेम पाएन । पूर्णकालिन प्रेम पाएन । प्रेमले पूर्णविराम पायो । पीडाले पंकजलाई पकायो । पंकजको परामन पीरले पाक्यो ।
पंकजको प्रेममा प्वाल पर्‍यो । प्रेममा परितोष पाएको पंकजले परिताप पनि पायो । पंकजको परितप्त परामनले पिर्‍यो । पंकजले परितापै परितापको पानी पियो । प्रेममा परितुष्टि पंकजले पनि पाएन । परितप्त परामनले परितुष्ट पाउँदैन । पंकजलाई परितापित पवनले पिरोल्यो । पंकजलाई परेलामुनिको पानीले पिरोल्यो । पिछडिएको पुरनपुरवासीले पंकजका प्रेम पनि पछाड्यो । पन्चारामले प्रतिद्धन्द्धी पंकजलाई पछार्‍यो । प्रतिद्धन्द्धीमा पंकजले पराजय पायो । प्रतिज्ञामा प्रतिबद्ध पंकजलाई पछार्‍यो पैसाले । प्रतिज्ञामा प्रतिबद्ध पन्चारामले प्रतिज्ञामा प्रतिबद्ध पंकजलाई पछि पार्‍यो । पीडाको पिलोको पीपले पिरोल्यो । पंकजले प्रेमले पदमिनीको प्रेमको पानी पिउन पाएन । पंकजको प्रेम पन्चारामको पैसाले पिस्यो । प्रतिदिनको प्रतिक्षणले प्रेमी पंकजलाई पिरोल्यो । पंकज परिहासको पात्रमा पर्‍यो । पंकजको प्रेम परिहासको पदार्थमा पर्‍यो । पदमिनीलाई परिहासको पात्रीमा पक्तमा परायो पुरनपुरवासीलाई । प्रेम रोटीको पाप्रो पनि पाएन पंकजले पछि । पंकजको प्रेम पृथ्थीतल पुग्यो । पंकजको परामनमा प्रणयभाव प्रशस्त पाइन्थ्यो । पदमिनीसँग प्रणयसुख पंकजले पाएन । पंकजले पश्चातापै पश्चातापको पानी पियो ।
परिताप पंकजबाट पछ्याउदै पंकजको पितासम्म पुग्यो । पदमिनीको पितालाई परितापले पक्डेन । पंकजको पिता प्रेमलालको परामनमा पनि परितापको पालुवा पलायो । पन्चारामको पितालाई पनि परितापले पछ्याएन ।
पुरनपुरको परिवर्जित परिस्थितिले पंकजलाई पिरोल्यो ।
पाखापखेराको प्रेमले पिरोल्छ । पानी पँधेराको प्रेमले पानी पिरोल्छ । पंकजको प्रेम पाखामा पर्‍यो । पुरनपुरको पाखा पखेराले पंकजलाई पिरोल्यो । पंकजको पवित्र प्रेमलाई पुरनपुरवासीले परपराउँथ्यो ।
प्रेममा प्रताडित प्रेमी पंकज प्रसाद पटेल पुनः पाल्पाबाट पंजाब पुग्यो । पाल्पाको पुरनपुरको पानी पंकजले पिएन ।
पंजाबमा पनि पंकजले पदमिनीसँगको प्रेमका पानाहरु पल्टाइरहृयो । पदमिनीको पाना पल्टाइरहृयो । पदमिनीको प्रेमले पंकजलाई पंजाबमा पनि पोलिरहृयो । पदमिनीलाई परिकल्पनामा पाइररहृयो । परिकल्पनाका पुस्तकका पानाहरु पल्टाइरहन्थ्यो । परदेसिएको पुत्र पंकज पल्पियो । पदमिनीको प्रेमले पंकजलाई पोलिरहृयो ।
प्रेमको पोलाइले पग्लयो । पंकजको पवित्र प्रेमले पग्लाइको परिपाटीलाई पनि पछ्यायो । प्रेमको परिपाटीबाट पागलपनको परिपाटी पछ्यायो । पागलपनको परिपाटीले प्रेमको परिपाटीलाई पछार्‍यो । पदमिनीबाट परित्याग पल पग्लायो । पे्रमले पंकजलाई पग्लायो । पदमिनीको प्रेमले पंकजलाई पग्लायो । प्रेमको पूर्णविरामले पंकज पग्लायो । पन्चारामसँग पदमिनी परिणयले परिछत्र परिस्थितिले पंकजले पग्लायो । पुरनपुरको पाखण्डी परम्पराको पंकजलाई पग्लायो । परकायको पासोले पग्लायो । प्रेमको पृृथकीकरणले पंकज पग्लायो । पहरेदारीका पदधारी पंकज पग्लयो । प्रशिक्षक पदधारी पंकज पग्लियो । पठित पुरुष पग्लियो । प्रेमको पश्चधर्ममा पंकज पग्लायो । पदमिनीको परिणयपश्चात पंकज पग्लयो । परिवर्तनशील प्रेमिकाको परामनले पंकजले पग्लायो । प्रेमलाई परिवर्त्य पदार्थमा पारिदैन । प्रेमको परिवर्धन पग्लाइमा पुग्यो । पहिरो पुरिएको प्रेमले पंकजलाई पग्लायो । पग्लाइमा पारे । पंकज पूर्णतः पग्लियो । पग्लिन प्रक्रिया पुर्‍याइदैन ।
Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Haveagood day.
Tags: Books by Jitendra SahayogeeDownload Nepali NovelFree Nepali Novel Download pdfFree Nepali Novel pdfJitendra SahayogeeNepali NovelNepali Novel BooksNepali Novel Download PDFNepali Novel OnlineNepali Novel PagalpremeeNepali Novel PdfNepali Novel Read OnlineNepali SahityaNepali UpanyasNepali Upanyas OnlineNepali Upanyas Read OnlineNovel By Jitendra SahayogeePagalpremeeRead Nepali Novel